Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Arbaco Ah 8 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo arbaco Ah 8 June
June 8, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Manchester City ayaa diiday soo jeedinta ah inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Arsenal iyo England Bukayo Saka, oo 20 jir ah (Mirror)
Manchester United iyo Tottenham ayaa labaduba xiiseynaya daafaca caalamiga ah ee kooxda Inter Milan Alessandro Bastoni, oo 23 jir ah.Daily Mail
Real Madrid ayaa heshiis ku kacaya 100 milyan oo euros (£85m) kula heshiisay kooxda Monaco 22 jirka khadka dhexe ee reer France Aurelien Tchouameni. Athletic
Chelsea, Newcastle iyo Paris St-Germain ayaa dhamaantood xiiseynaya 22 jirka Portugal iyo AC Milan ee Rafael Leao. La Repubblica via Football London
Kooxaha Chelsea iyo Tottenham ayaa isku diyaarinaya saxiixa 27 jirka daafaca uga ciyaara kooxda Inter Milan ee Milan Skriniar kaas oo wakiil ka ah Slovakia heer caalami. Daily Mail
Tottenham ayaa wadahadal la furtay weeraryahanka Manchester United iyo England Marcus Rashford, oo 24 jir ah, si uu ugu dhaqaaqo waqooyiga London. Caugh
Arsenal ayaa kalsooni ku qabta inay la soo saxiixan karaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leicester iyo Belgium Youri Tielemans iyadoo aysan jirin koox u soo baxday Champions League oo xiiseyneysa 25 sanno jirkaan. Daily Mail
Everton ayaa u calaamadsatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham iyo England Harry Winks, oo 26 jir ah, saxiix macquul ah xagaaga. Telegraph
West Ham ayaa indha-indheeyayaal u dirtay inay daawadaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Denmark iyo Brentford Christian Eriksen, oo 30 jir ah, iyo saaxiibkiisa caalamiga ah ee daafaca midig ee Atalanta Joakim Maehle, oo 25 jir ah. Star
Leeds ayaa qarka u saaran inay ku dhawaaqdo saxiixa 24 jirka daafaca midig ee Danish Rasmus Kristensen oo u ciyaara kooxda Red Bull Salzburg. Fabrizio Romano on Twitter
Manchester United iyo Newcastle ayaa lagu soo waramayaa inay yihiin labada kooxood ee ugu dhow saxiixa 22 jirka Benfica iyo weeraryahanka Uruguay Darwin Nunez. Star
Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa loo balan qaaday in uu hogaamin karo ganacsiga suuqa kala iibsiga kadib milkiilaha cusub ee Todd Boehly kaas oo u dhaqaaqay in uu ku daydo kooxaha Manchester City iyo Liverpool. Telegraph
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Brighton iyo Mali Yves Bissouma, oo 25 jir ah, hadda kuma jiro liiska bartilmaameedyada Aston Villa . Si kastaba ha ahaatee, tababaraha Villa Steven Gerrard ayaa laga yaabaa inuu weli raadiyo ciyaaryahan dhexe oo cusub xagaagan. Sports
Weeraryahanka Poland Robert Lewandowski, oo 33 jir ah, ayaa u sheegay podcast Polish inuu ka tagayo Bayern Munich sababtoo ah wuxuu doonayaa “dareen badan” noloshiisa, kooxda heysata horyaalka Jarmalka “ma aysan dooneyn inay i dhagaystaan ​​​​dhammaadka”. Bild – af Jarmal
AC Milan ayaa rajeyneysa inay dhameystirto saxiixa daafaca reer Holland Sven Botman, 22, iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Portugal Renato Sanches, 24, oo ka yimid Lille . 90 min
Newcastle ayaa ku dhow inay 12 milyan ginni kula soo wareegto 26 jirka daafaca bidix ee Ingariiska Matt Targett oo amaah uga soo dhaqaaqay Aston Villa si joogto ah. Daily Mail
Leeds United ayaa ku biirtay kooxaha Southampton iyo West Ham xiisaha ay u qabaan 20 jirka Red Bull Salzburg iyo weeraryahanka Austria Junior Adamu. Sky Sports Austria
Weeraryahankii hore ee Manchester United iyo Netherlands Robin van Persie, oo 38 jir ah, ayaa sheegay inuu iska diiday fursad uu ugu biiri lahaa Erik ten Hag oo ah kaaliye ka tirsan Old Trafford. Mirror